ကလေးတစ်ဦးကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ဖို့ မေမေတို့ တာဝန်ကျေရမယ့်အရာ (၃) ခု
Home Lotaya ကလေးတစ်ဦးကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ဖို့ မေမေတို့ တာဝန်ကျေရမယ့်အရာ (၃) ခု
စည်းကမ်းက မိဘဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ နားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းသတ်မှာတ်ချက်တွေ လွဲမှားမှုကြောင့် မိဘနှင့်သားသမီးအကြား ပဋိပက္ခတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကလေးငယ်တွေကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ဖို့ မေမေတို့အနေနဲ့ ဘာတွေတာဝန်ကျေဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ မေမေတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေပါစေ
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဘယ်လိုအပြုအမူတွေစွဲမြဲစေချင်ပါသလဲ? ဧည့်သည်တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုမူစေချင်ပါသလဲ? အများပြည်သူရှေ့မှာ ဘယ်လိုအမူအကျင့်တွေဖြစ်စေချင်ပါသလဲ? ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုရော ဘယ်လိုနားလည်ထားပါသလဲ?
ပထမအပိုဒ်မှာ ကျွန်မမေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ချို့အတွက် မေမေတို့မှာ အဖြေမရှိဘူးဆိုရင် ကလေးငယ်လေးကို ဘယ်လိုဆုံးမမယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မေမေတို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့စည်းကမ်းတွေက ထိန်းသိမ်းသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိသင့်ပြီး သို့မှသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လက်တွေ့ကျပါ (အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံပါစေ)
ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေကမှ ပြီးပြည့်စုံစွာဖြစ်မြောက်လာခြင်းမရှိကြောင်း သတိရပါ။ လက်တွေ့ကျပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးအတွက် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော တိကျသော၊ လက်တွေ့ကျပြီး အကန့်အသတ်ရှိသော ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပါ။ ကလေးငယ်အတွက် ခက်ခဲလွန်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖိအားပေးလွန်းတဲ့အခါ ကလေးဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လက်လျှော့အရှုံးပေးပါလိမ့်မယ်။ မေမေတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့ကျ/မကျဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ”မေမေတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက ကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လွယ်ကူစေပါသလား? ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေက တကယ်ရော တန်ဖိုးရှိရဲ့လား? ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေက ကိုယ့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် သင်ယူနိုင်ပါသလား? ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသလား?။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို အမြဲလိုလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်နေခြင်းက မေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေးအတွက် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မေမေတို့ကိုယ်တိုင်က ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်စည်းကမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ရှေ့နောက်မညီညွှတ်ခြင်းက ကလေးငယ်တွေကို မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ရိုက်သွင်းနေသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲလာခြင်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် မလုံခြုံမှုကိုလည်း ခံစားရစေပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပါ ပျောက်ဆုံးစေပါတယ်။
အချိန်တိုင်းနှင့် နေရာတိုင်းမှာ တသမတ်တည်းရှိပါစေ။ လူမြင်ကွင်းရောက်ခါမှ ကလေးအားနှိမ့်ချခြင်း (သို့) စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကို မလုပ်ပါနဲ့။
Previous articleကလေးတွေကို အိမ်ရာဝင်ချိန် ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင် သင်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၁၁)မျိုး
Next articleမိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မသက်မသာအဖြစ်ရဆုံး အကြောင်းအရာ (၄) ချက်